Sajhasabal.com |शिल्पा भन्छिन् - 'मेरो श्रीमानले मलाई मार्नुहुन्छ, सोचेको थिइन', सम्बन्धविच्छेद हुने पक्का
असार ३१, काठमाडौँ | पछिल्लो समय अभिनेत्री शिल्पा पोखरेल र निर्माता छवि ओझाबीचको घर झगडाको बिषयले बजार तातेको छ । यसैमा मंगलबार शिल्पाले छविसंग सम्बन्ध बिच्छेद गर्न लागेको समाचारले नेपाली संचार जगतमा महत्वपूर्ण स्थान पाएको छ । शिल्पा आफैले छविसंग सम्बन्ध बिच्छेद गर्न लागेको स्पष्ट पारेकी छन् । फिल्मी वेवसाइट 'न्यूज फिल्मी'लाई दिएको भिडिओ अन्तरवार्तामा उनले उक्त खुलासा गरेकी हुन् ।
विवाहको तेश्रो वर्षगाँठ पुर्वनै निर्माता छविराज ओझा र अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलको सम्बन्ध घरेलु हिंसाको मामिला बनेर प्रहरीकोमा पुगेको थियो । घटना सार्वजनिक भएसंगै त्यसयता उनीहरुको समाचारको बिषय बन्दै आएका छन् । शिल्पा प्रहरीकोमा पुगेपछि छविले माफी मागेका थिए र मिलापत्रमा पनि भएको थियो । तर अभिनेत्री शिल्पाले आफूले डिभोर्सको प्रक्रिया थालेको खुलासा गरेकी छन् ।
शिल्पाले दिएको भिडियो अन्तरवार्तामा भनेकी छन् - 'मिडियामा मलाइ छविजीले धेरै आरोप लगाउनु भएको छ । म आफै खाना बनाएर खुवाउथे । थोरै जनाको समर्थन छ मलाइ, तर म त्यसैमा खुसी छु । ३ बर्ष चुप लागे त अब म मर्नु ? धेरै गारो भएर पुलिसकोमा गएँ । मेरो इज्जतको ख्याल गरेर ३ बर्ष चुप बसें । ३ बर्ष बसेको मान्छेको माया लाग्दैन र ? मेरो आमा बाबु भन्दा माथि राखेको मेरो श्रीमानले मलाई मार्नुहुन्छ सोचेको थिइन ।' 'फोन आउँछ कि भनेर मैले पर्खे । के गर्नुहुँदैछ ? भनेर फोटो हेरी चित्त बुझाउन फेसबुकमा खोजें । ब्लक पो गर्नु भएछ । फोन गरेर केयर गर्नुहुन्छ भनेको त ब्लक पो गर्नु भएछ । मेरो पिडा कसैले बुझेन । कानुनले श्रीमतीको हैसियतले जे दिन्छ म स्वीकार्छु । म त्यो घरमा फर्केर जादिन ।'
ओझाले शिल्पालाई सम्बोधन गर्दै लेखेको फेसबुक स्टाटसको संपादित अंशः
मैले ५२ बर्षको उमेरमा ३ जना श्रीमतीसंग सम्बन्ध बिच्छेद भईसकेपछि तपाईंसंग चाहिँ जिन्दगि बिताउन सक्छु होला भनेर जिन्दगिका सब थोक कम्प्रमाइज गरेर मायाँ गरेर बिहे गरेको श्रीमती हो तपाईं । छातिमा हात राखेर आज एकछिनलाई आफैलाई नढाटी सम्झनुस् तपाइले लगाएका कति आरोपहरु सत्य छन ? यदि तपाईं पनि आफुलाई सच्याएर अझै मेरो श्रीमती, तपाइले बिहे गर्ने बेलामा आश्वासन दिलाए जस्तै मेरो बुढेसकालको सहारा बनेर बस्न सक्नुहुन्छ भने, म पनि मेरा कमी-कमजोरीहरु सच्याएर गान्धीवादी भएर बस्न सक्छु । अरुको कुरा नसुन्नुस्, आउनुस् हाम्रो घरको ढोका सधै तपाईंको लागि खुल्ला छ । हैन र यदि तपाइ साच्चै मसंग बस्न सक्नुहुन्न भने पनि एक पटक मसंगै आएर टेबलमा कुरा गर्नुस् । मेरो ईतिहास पल्टाएर हेर्नुस्, आजसम्म मैले कुनै पनि श्रीमतिलाई अन्यायमा पारेको छैन । तपाइलाई पनि पार्दिन । मैले बिगत ३ दिनदेखि तपाइलाई सम्पर्क गरेर भेट्न खोज्दा पनि तपाइलाई अव मेरो वकिलले भेट्छ भन्नूभयो । म फेरि पनि भन्दैछु, संसारको कुनै पनि अदालतमा जानू पर्दैन । छवी ओझाको अदालतमा सिधै आउनुस् । तपाइले न्याय पाउनु हुन्छ ।